VOLLEY – AMBOARAN’I AFRIKA : Nahazo 150 tapitrisa Ariary tamin’ny Filoha Rajoelina ny Gnvb
Mahatratra hatrany amin’ ny 135 tapitrisa Ariary mahery ny fandaniana tsy maintsy atao mba hahafahan’ ireo delegasiona malagasy miainga eto an - tanindrazana ny alakamisy faha - 28 marsa izao miampy ny fivahiniana any Egypte mandritra ny fifaninanana. 25 mars 2019
Nangatahan’ ny Sekreteram - panjakana miadidy ny Zandarimara izay nitarika ny delegasionin’ ny Gnvb tamin’ ny Filohampirenena ny hoenti - manana amin’ io fivahiniana io. Ankoatra izay nosoritany ihany koa fa mivonona ny hitady fandresena ny ekipan’ ny zandarimari izay vao avy voahosotra ho tompondakan’ ny Faritra fahafito nandritra ny fifaninanana farany teo notontosaina ny volana febroary teto amintsika. Amboara roa no nentin’ ny delegasiona teny Ambohitsorohitra omaly, ny iray efa intelo misesy no nahazoana azy ka efa azontsika tanteraka fa ny iray kosa vao indray mandeha ka mila azo indroa aorian’ izao vao tena hoa zontsika tanteraka.Imbalo kosa araka ny nambaran’ ny Jeneraly Ravalomanana Richard hatrany no efa voahosotra ho tompondakan’ i Madagasikara ny Gnvb ary izao fivoahana mankany Egypte izao dia hitondran’ izy ireo amboara mody.
Niarahaba sy nankasitraka ny GNvb ny filoham - pirenena no koa nanambara fa hanolotra vola 150 tapitrisa ariary hiatrehan’ izy ireo izao fifaninanana izao. Nampahery azy ireo ihany ko aizy mba hananadratra avo ny voninahi - pirenena. Manomboka izao, hoy ihany izy, horaisin’ ny Fanjakana an - tanana ny fiantohana ireny fivahinian’ ny mpikatroka malagasy eo amin’ ny sehatra iraisam - pirenena tokony hatrehintsika ireny. Mifandraika amin’ izay ihany, afaka roa taiona raha ela indrindra na herintaona sy tapany eo no ho tafajoro ny Akademiam - pirenena momba ny fanatanjahantena, any no hianatra ireo atleta ary tsy hanao afa - tsy fanatanjahantena. Ny Fanjakana no hiantoka ny lany rehetra fa ireoa tleta ireo kosa hifantoka amin’ izay fanatanjahantena izay ary hahazo « bourse » mba tsy hitenenana hoe karama, hoy hatrany ny Filohampirenena. Ary dia nofaranany tamin’ ny tsodrano moa ny fihaonana mba ho omby mazavaloha ireto atleta malagasy ireto ka ho tsara mandroso tsara miverina ary hitondra amboara mody.
Hahatratra 19 ny delegasiona malagasy hanainga amin’ io alakamisy io ka ny 15 amin’ ireo no mpilalao. Ny efatra ambiny kosa tekiniasianina. Ny tanjona araka ny nambaran’ ny Maître Andriamanantena Tahiana Nirina mpanazatra dia ny dingan’ ny ampahefa - dalana no hotratrarin’ izy ireo. Fanindroany izao no niatrika lalao afrikanina tahaka izao ny Gnvb ary tamin’ izay laharana faha - 12 tamin’ ireo Firenena 24 nandray anjara ny Gnvb. Amin’ ity kosa izany kendrena ny hahatafiditra ao anatin’ ireo Firenena valo tsara indrindra aty Afrika.
Nanambara hatrany moa ity tekinisianina malagasy ity fa efa mihatsara ny afrikianina ka tsy maintsy miezaka manatratra izay ihany koa isika Malagasy.